Farmaajo oo Qaabilay Qoyska Marxuum uu Jiiray Gaadiid Isaga Gelbinayey – Radio Daljir
Farmaajo oo Qaabilay Qoyska Marxuum uu Jiiray Gaadiid Isaga Gelbinayey
Abriil 24, 2017 7:15 g 0
Madaxweynaha Somali Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ku qaabilay Madaxtooyada Villa Soomaaliya Qoyska ALLAHA u naxariistee Marxuum Tahliil Jimcaale Hubane oo ka tirsanaa shaqaalaha Wasaaradda Wafaafinta kaasoo ku dhintay shil gaari oo ay ku lug lahaayeen kolonyo shalay gelbineysay Madaxweynaha xilli uu ku sii jeeday Baydhabo.
Farmaajo wuxuu sheegay in xabsiga la dhigay darawalkii Waday Gaariga, si loo baaro in shilkaasi uu si kutalagal ah u sameeyay iyo in uu Qadar Alle ku yimid.
“Marxuumka naxariistii Janno Alle ha ka Waraabiyo, Qadar ayuu ku dhintay, Dowladda Soomaaliya way ka garaabeysaa Geerida Marxuumka, Ehelkana waan la qeybsanayaa tiiraanyada, sida uu shilku ku dhacay baaris ayaa ku socoto waxaana idiin ballanqaadayaa in xuquuqda marxuumka aysan dowladdu meel cidlo ah kaga dhaqaaqi doonin” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Mudane Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) oo Kulanka ka dib qabtay Shir jaraa’id isagoo uu Garab taagan yahay Cabdi Jimcaale Hubane oo la dhashay Marxuumka Geeriyooday ayaa ballanqaaday inay diyaar u yihiin sidii loo ilaalin lahaa Xuquuqdii Marxuumku uu ku lahaa Dowladda Soomaaliya, Isagoo Qoyska Guddoonsiiyay Lacag Loogu Talagalay in duco loogu Sameeyo Alle ha u naxariistee Marxuum Taliil Jimcaale Hubane.
Cabdi Jimcaale Hubane oo ah marxuumka shilka ku dhintay walaalkii oo goobta ka hadlay ayaa mahadcelin weyn u jeediyay MadaxweynahaWuxuuna Arrin Ugub ku ah Soomaaliya ku tilmaamay sida loo ixtiraamay Qoyskooda, dowladda Soomaaliyana uga Garoowday Shilka uu ku geeriyooday Marxuum Tahliil Jimcaale Hubane.
Caawa iyo Daljir iyo Maxamed Cabdi Maxamed Lakiman (DHEGAYSO)